SPYV004 - OMG Mini Car Audio Recorder - အသံစဉ်ဆက်မပြတ်နားထောင်ရန် ၁၃၅-၂၀၀ နာရီ OMG Solutions
1) 135 နာရီစဉ်ဆက်မပြတ်စကားသံကိုမှတ်တမ်းတင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
2) အော်တိုအသံ-ကားတစ်စီးစကားပြောဆိုမှုစတင်သည်နှင့်စကားလက်ဆုံပြီးဆုံးသည့်အခါရပ်သည့်အခါမှတ်တမ်းတင်စတင် function ကို support ကိုသက်ဝင်စေ။
3) Built-in 2000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံလီသီယမ်ဘက်ထရီအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကားအတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ် device ကိုနိုင်ပါတယ်။
4) စက်မှု-အစွမ်းသတ္တိကိုသံလိုက် built-in ပုံမှန်ကားကိုသန့်ရှင်းရေးကိုရှောင်ရှားဖို့ကားထိုင်ခုံအောက်တွင်ပူးတွဲခံရ device ကိုထောကျပံ့
1) ကိုယ်ကသာကို PC ကနေတဆင့်တရားစွဲဆိုခံရဖို့ရှိပါတယ်။
USB ကြိုးချွတ် plug ကိုခင်မှာ 2), သငျသညျကို PC ပေါ်မှာညာဘက်အောက်ခြေတွင်ပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲမှပထမဦးဆုံးကဖြတ်လိုအပ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်မှာ USB cable ကိုချွတ် ယူ. မသွားနိုင်။ သငျသညျကို PC နောက်တစ်ကြိမ်ဖို့အသံဖမ်းချိတ်ဆက်သည့်အခါအခြားသူသည်, PC ကိုကအသိအမှတ်မပြုလို့မရပါဘူး။
သူလျှိုစကားသံကိုအသံဖမ်းဒီဇိုင်း, အသံမြည်သောအသံသွင်းဝှက်ထား အတွင်းအပြင် function ကို သေးငယ်တဲ့ဦးဆောင်မီးရှူးတိုင်ထက်သောအနေဖြင့်, အဘယ်သူမျှမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်အမှတ်အသားပြုလုပ်မယ့်တစ်ဦးဦးဆောင်သည့်မီးရှူးတိုင်။
ကားတစ်စီးထိုင်ခုံအထဲမှာ install သို့မဟုတ်ဝှက်ရန်လွယ်ကူအစွမ်းထက်သံလိုက်ဒီဇိုင်း,? ကားတစ်စီးအောက်ခြေလက်အောက်တွင်?
Long ကဘက်ထရီသက်တမ်း 135-200 နာရီ.
Voice ကို activated အသံဖမ်းဒါမှမဟုတ် အချိန်ဇယားကိုအသံဖမ်း.
3470 စုစုပေါင်း Views စာ4Views စာယနေ့တွင်